बलात्कार प्रयास अभियोगमा नेकपाका प्रदेश सांसद पक्राउ - अभियान खबर
कैलाली । एक महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद पक्राउ परेका छन् । हाल कैलालीमा बस्दै आएका अछाम क्षेत्र नम्बर २(क) बाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेश सांसद अक्कल बहादुर रावल पक्राउ परेका हुन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ की एक महिलालाई उनले बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । पीडित भनिएकी महिलाले केही दिन पहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि प्रहरीले खोजी गर्दै आएपनि फेला नपरेका उनी बुधबार भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आफैं उपस्थित भएका थिए ।
उनी प्रहरीमा उपस्थित भएसँगै नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उनलाई जबरजस्ती करणी प्रयास मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरिने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार घटना गत माघ २१ गतेकै भएपनि ढिलागरी उजुरी परेको थियो ।
Posted on February 20, 2020 February 20, 2020 Author abhiyaan
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । मन्त्री बास्कोटा कमिसनको चक्करमा फसेको समाचार अडियोसहित हाम्राकुराले ब्रेक गरेपछि कांग्रेसले उनलाई तत्काल बर्खास्त गरी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको हो । कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तयारीसंगै ठूलो रकमको अनियमितता तयारी भैरहेको थियो भन्ने अनुमानित […]
नुवाकोटका एस्पि,जिल्ला भित्र शान्ती शु ब्यबस्था देखि अबैध उत्खननको ब्यबस्थापन सम्म!!
Posted on February 12, 2019 February 12, 2019 Author abhiyaan
निराजन बजगाई,नुवाकोट एस्ता छन नुवाकोटका एस्पि,दुई महिनाको अन्तरालमा जिल्ला भित्र शान्ती शु ब्यबस्था देखि अबैध उत्खननको ब्यबस्थापन सम्म!! संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिए लगत्तै देश स्थाइत्वको गतिमा लैजान सबैभन्दा महत्त्व भुमिका प्रहरीको हुन्छ। बिगत दुई महिना अगाडि देखी नुवाकोट प्रहरीको कमान्ड सम्माल्दै आउनुभएका एस्पि कृष्ण बहादुर पल्ली मगर आइसकेपछि प्रहरी […]
पोखरा असार /पोखरा सबै मौसमका लागि भन्ने नारा सहित १५ औ असारे रोपाई महोत्सव पोखरा महानगरपालिका २४ पामे हुने भएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा हुन लागेको रोपाई महोत्सवमा स्वदेशी तथा विदेशीहरु भाग लिने आयोजकले बताएका छन् । असार १५ गते हुने महोत्सव अशोक पालिखे र कृष्णमोहन पराजुलीको चार रोपनी जग्गा महोत्सव गर्न लागेको […]
याे एक शब्द : जसले सम्बन्ध सुमधुर बनाउँँछ